Serasera.org - Blog: Toe-draharaha Karajia.org
Efa andro vitsivitsy izay no niadiana tamin'ireo bandy mpigafy ao amin'ny karajia.org. Efa nisy ihany ireo fepetra noraisina vitsivitsy saingy tsy afaka manoatra firy satria manjary betsaka koa ny ankizy voasakana raha tena ampiharina daholo ny fitsipiky ny aro loza rehetra. Ny hirariana fotsiny dia mba ho eo hatrany ny ops rehefa raikitra ny fanafihana satria azon'ny op sakanana ihany ilay izy.
Fa toa izao ny zavatra kely azo zaraina momba io karajia.org io.
Nanomboka tamin'ny 22 janoary 2010 dia naka lohamilina (serveur) manokana ho azy ny karajia.org rehefa avy nampiasa ny tambazotra (reseau) epiknet.org nandritra ny 7 taona. (Tamin'ny 2003 tokoa mantsy no nanomboka nisy chat teto amin'ny serasera ka tao amin'ny epiknet.org no nangataka trano.) Tsy dia sarotra loatra ny nametraka ilay lohamilina satria natao faran'izay tsotra. Araka ny nolazaiko dia tsy dia nandaniana andro be loatra ny resaka fiarovana satria tsy noheverina hisy hanafika izany mihitsy izy io.
Nanomboka nisokatra tsara tao amin'ny tambazotra karajia.org ary ny efitra #serasera ny 23 janoary 2010 izay efitra ofisialy voalohany. Misy eo amin'ny 50 eo ny salanisan'ny ankizy mi-chat ao isanandro. Misy fotoana mahatratra 80 tsy ao anatiny ny robots isankarazany.
Nanomboka tamin'ny Jolay 2010 dia notehirizina ny resaka rehetra mandalo eo amin'ny efitra #serasera. Nanomboka tamin'io ka hatramin'izao anoratako izao dia mahatratra 1.489.844 ny isan'ny andalana voasoratra tao. Mahatratra 34.573 kosa ny isan'ny solonanarana efa nandalo tao. Marihina fa ny solonanarana iray dia tsy midika hoe olona iray. Amin'izao dia 19 ny efitra voatahiry ankoatra ireo efitra izay foronin'ny ankizy fa tsy tehiriziny.
Misy solonanarana voatahiry (enregistrés) 129 amin'izao fotoana izao. Marihina fa ny solonanarana voatahiry dia voafafa ho azy ao anatin'ny 40 andro. Ireo solonanarana 129 ireo izany dia ireo izay nampiasaina tao anatin'ny 40 andro farany.
Raha ireo rehetra ireo no dinihina dia rariny ihany raha misy manafika isanandro ny karajia.org. Izy no chat gasy tranainy indrindra, izy no chat gasy be mpi-chat indrindra, izy no manana mpikarakara be fandeferana indrindra :-p
Koa mahereza fa ny lalao mbola ho ela
Publié par Eugene Heriniaina à 3/06/2011 08:04:00 AM
Libellés : karajia, tantara